အာသာဖြေတော့ အာသာပြေတာပေါ့: မမသွယ်
သူမ၏အမည်မှာဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ဖြစ်၍ကလေး၂ ယောက်မိခင် ဖြစ်သည်။သူမ၏ယောင်္ကျားဖြစ်သူ
Øသား သားရေ သားသား×
တယောက်စဉ်းစားမရဖြစ်နေလေသည်။အမှန်မှာဇော်ဇော်တို့လင်မယား ၂ ယောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် ခေါ်သွားခြင်း
စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့် ဆပ်ပြာမြှုပ်တို့တွယ်ကပ်နေသောနို့အုံကြီးနှစ်ခုကိုတချိန်တည်း တွေ့ရလေသည်။
Øမမသွယ်ရေ မမသွယ် ရေချိုးနေတာလား×
ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏လက်မောင်းသားကြီးကိုစမ်းမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဘာမပြောညာမပြောနှင့် လက်မောင်း နှစ်ဖက်
Øအို မောင်မျိုး ဘာလုပ် အင့်အင်း ဟင်း×
မောင်မျိုးမှာဖက်ထားရင်းမှကားစွင့်နေသောဖင်ကြီးနှစ်လုံးအားပွတ်ပေးလိုက်ရာ။ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ Øအင်း အင်း×
ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ထံမှ Øအင်း× ဟူသောညည်းသံသဲ့သဲ့လေးသာကြားလိုက်ရသည်။မောင်မျိုးသည် နောက်သို့ဆုတ်
Øမောင်မျိုးရယ် ဘယ်လိုလုပ်တာလဲကွယ် အို အင်း ဟင်း×
Øအင်း ဟင်း ဟင်း× ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ အင်းသံတချက်သာကြားလိုက်ရသည်။
Øအာ လား လား×
Øပြွတ် ပြွတ် ဗြွတ် ပြုတ်×
နေ၍လူးလွန့်လျက် နေလေတော့သည်။ သို့ဖြင့်အချက်သုံးလေးဆယ်ခန့်ဆောင့်၍ပေးလိုက်သောအခါ
Øအား မောင်မျိုးရယ် ခပ်ပြင်းပြင်းလေးလိုးလိုက်ပါကွယ်၊မမသွယ်ပြီးတော့မယ် အား လာ လား×
Øခဏလေးနော်မမသွယ်၊က္မန်တော်လဲပြီးတော့မယ်× မောင်မျိုးကခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ပေး လိုက်ရာ၊ Øပြွတ်
မွေ့ယာပေါ်သို့လှဲချကာအိပ်လိုက်ပြီး၊မို့ဖေါင်း နေသောပါးပြင်အားနမ်းရှုံ့လိုက်သည်။ ပြီးမှဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏
Øမမသွယ်ရယ် မောင်မျိုးလေ မမသွယ်ကိုအရသာရှိရှိလေးချစ်ချင်လို့ပါ× ပြောပြောဆိုဆိုပင်
Øအို အားလား အင်း ဟင်း ဟင်း မောင်မျိုးရယ် မလုပ်ပါနဲ့ကွယ် မမသွယ်ရင်တွေတုန်နေတယ် တမျိုးကြီးဘဲ×
Øမောင်မျိုးရယ် တော်ပါတော့ကွယ် မမသွယ်မနေတတ်တော့ဘူး အင်း ဟင်း ဟင်း×
Øမောင်မျိုးရယ် မောင်မျိုးလီးကြီးကအကြီးကြီးဘဲကွယ်× ပြောပြောဆိုဆိုထ၍ထိုင်လိုက်ပြီးလီးကြီးအားငုံ၍ နမ်း
Øမောင်မျိုးရယ် လီးကြီးကအကြီးကြီးဘဲကွယ် မမသွယ် မနေတတ်တော့ဘူး လုပ်ပေး ပါတော့ ကွယ် နော်×
Øမောင်မျိုးရယ် လိုးပါတော့ကွယ် မမသွယ်မနေနိုင်တော့ဘူး×
Øပြုတ် ဗြုတ် ပြွတ်×
Øအား လား အင်း အာ×
Øအား အင်း အား အင့်×
Øအို အင့် ဟင်း မောင်မျိုးရယ် ဘာလုပ်မလို့လဲကွယ်×
Øအား က္မတ် က္မတ် အား နာတယ် မောင်မျိုး×
ကြီးမှာအထဲမှသားအိမ်ဝနှင့်သွားပြီးထောက်မိလေသည်။ယခုလိုလေးဘက်ထောက် လျက်လိုးရသည်မှာ ၂ဦးစလုံးအဖို့
Posted by myanmar-love-stories at 12:40 PM 20 comments
Øဗြွတ် ပြွတ် ပြွတ်×
လေသည်၊ပြီးမှလက်နှစ်ဘက် ဖြင့်နို့ကြီးများအားပူး၍ဆုပ်ကိုင်ကာသူ၏လီးကြီးအား ထိုးထည့်လိုက်ပွတ်လိုက်လုပ်
Øမောင်မျိုးရယ် တတ်လှချည်လားကွယ် မမသွယ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းကိုမသိတော့ဘူး၊×
Øမမသွယ်ရယ် ကျနော်လေမမသွယ်ကိုအမျိုးစုံအောင်ချစ်ပြချင်လို့ပါ နော်×
Øလုပ် လုပ် မောင်မျိုးကြိုက်သလိုသာလိုးပါတော့ အား လား အင်း×
ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်တယောက်သူ့ထက်၇နှစ်-၈နှစ် ခန့်ငယ်သောမောင်မျိုးကိုစွသွဲားသည်ကတော့အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
Øအို မောင်မျိုးရယ် သူများတွေမြင်သွားဦးမယ်×
အရည်များဖြင့်စိုရွှဲနေလေတော့သည်ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်သည် Øဟင်း× ကနဲသက်ပြင်းချလိုက်ပြီး
Øအား အင်း ဟင်း ဟင်း မောင်မျိုးရယ် မမသွယ်မနေနိုင်တော့ဘူးကွယ်၊တက်လိုးလိုက်ပါတော့ မောင်မျိုးရယ်×
Øအား က္မတ် မောင်မျိုးရယ်ကောင်းလိုက်တာ×
Øကောင်းတယ် အားလား မောင်မျိုးရယ် မမသွယ်ခံနိုင်ပါတယ်၊ မင်းသာဝအောင်လိုးပါ×
Øအား အမလေး အားလား အင့်အင်း ဟင်းဟင်း×
လီးကြီးမှာ စောက်ဖုတ်အတွင်းအဆုံးသို့ရောက်သွားတိုင်းသားအိမ်ဝနှင့်ဒုတ်ကနဲ ဒုတ်ကနဲထိနေလေသည်။
Øအား မောင်မျိုးရယ် အရည်တွေပန်းထွက်ကုန်ပြီ×
Øမရှိဘူး မမသွယ် သူ့အမေနေမကောင်းလို့ အိမ်ခဏပြန်သွားတယ်× ဇော်ဇော်ကပြောရင်းက
Øအော် မမသွယ်အခန်းထဲကဘီဒိုလေးရွှေ့ချင်လိုပါ၊ အဲဒါ×
Øခဏလေးနော် မမသွယ် က္မန်တော်ရေချိုးပြီးရင်လာပြီးရွှေ့ပေးပါမယ်×
Øအေး အေး× ဟုခေါင်း0x150ှိတ်ရင်းဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်အခန်းတွင်းသို့လှည့်၍၀င်သွားလေရာ၊ ဇော်ဇော်သည်
တွေ့လိုက်ရလေသည်။ ပထမတော့ဇော်ဇော်တယောက်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားသည်။ စောစောက
သုရေချိုးတုန်းကသူသေသေချာချာ မှတ်မိပါသည်။သူကိုယ်တိုင်ငေးမောကြည့်ခဲ့ပါသေးသည်။ အခုစောစောက
Øလာဇော်ဇော် ဘီဒိုကိုဒီဘက်လှည့်မလို့ကွယ် မင်းအဲဒီဘက်ကိုင်၊မမသွယ်ဒီဘက်ကကိုင်ရွှေ့မယ်×
Øအား က္မတ် က္မတ်× ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်မှာပေါင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိ၍ကုတင်ပေါ်သို့ထိုင်ရင်း ရှုံ့မဲ့သွားလေသည်။
Øအား နာတယ်ဇော်ဇော်ရယ်၊ ဘာများဖြစ်သွားလည်းမသိဘူး×
Øအား နာတယ်ဇော်ဇော်ရယ် အရိုးများကျိုးသွားလားမသိဘူး×
Øအို ဇော်ဇော်ဘာလုပ်တာလဲကွယ် ကွယ်လွှတ်×
Øအင်း ဟင့်× ညည်းသံကလေးထွက်လာသည်။
Øအား ဇော်ဇော်ရယ် မလုပ်ပါနဲ့ကွယ် မမသွယ်မနေတတ်ဘူး×
Øအား က္မတ်က္မတ် ဇော်ဇော်ရယ်×
Øအင်း ဟင်း အား ဇော်ဇော်ရယ်×
Øအား နာတယ် က္မတ်က္မတ်×
Øအားနာတယ် ဇော်ဇော်ရယ် မမသွယ်နာတယ်×
Øခဏပါမမသွယ်ရာ၊ တော်တော်ကြာမနာတော့ပါဘူး× ဟုပြောရင်းအောက်မှနေ၍အလိုက်သင့်ကလေး ကော့
Øအား အင်း အင်း အား ဇော်ဇော်ရယ် မမသွယ်မနေနိုင်တော့ဘူး ထွက်တော့မယ် အာလာ လား ထွက်ကုန်ပြီ၊
အိုက္မတ်က္မတ် အင်း ဟင်း×
Øမမသွယ် ကျနော်လည်းပြီးတော့မယ်၊ဆက်ပြီးတော့ဆောင့်လိုက်ပါ မမသွယ်ရယ်×
Posted by ချစ်လူမိုက် at 9:38 AM
ak January 3, 2013 at 3:17 AM
ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်လုပ်သူတွေက ဘယ်နေရာကို ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကျေနပ်မှုပိုစေမယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်
လက်နဲ့ ပွတ်သပ်တာ၊ ကလိတာ၊ ထိုးသွင်းတာတွေ မ-အစိအထက်နေရာ အရေပြားကို ထက်-အောက်၊ ဘယ်-ညာ၊ စက်ဝိုင်းလို ကြိုက်သလို လုပ်နိုင်တယ်။ သာယာမှုရရင် အရည်ပိုစိုစွပ်လာမှာ အမှန်ပါ။
အမျိုးသမီးတွေ Orgasm ပြီးတဲ့အခါ ထွက်တဲ့အရည်ဖုတ်မှသုတ်ရည် ပဲငံပြာရည်လိုပဲ ချိုလဲချိုတယ် တော်တော်အရသာရှိမယ်နော် သဇင်က ရှင်းပြတယ်...ဘယ်လိုအရသာရှိကြောင်း Female ejaculate ထဲမှာ Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) တမျိုးပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ Orgasm ပြီးတဲ့အခါ ထွက်တဲ့အရည် ချိုလဲချိုတယ် တော်တော်အရသာရှိမယ်နော် သဇင်က ရှင်းပြတယ်.
ak January 3, 2013 at 3:19 AM
ရန်ကုန်မှာမွေးပြီး ဟေ. ကောင်တွေ ...စော်တွေကရည်းစားထားတာ ဘာလုပ်ဖို့လဲ....? မသေမချင်းမှတ်ထားကွ အလိုးခံချင်လို့ အလိုးခံချင်လို့ သိပြီလား .... ဟေ့ကောင်တွေ စောက်ဖုတ် ကို လိုးချင်တာယောကျားတွေရဲ့သဘာဝကွ.
ak January 3, 2013 at 3:20 AM
ရုံးထဲမှာအပေးကတော့ရွှေမလေးတွေ ဖင်တွေ အားပါးပါး နဲတာကြီးမှ မဟုတ်တာ အလုပ်ချိန်ပြီးတော့ ဖုတ်ချိန်..အော်...ရုံးထဲမှာအပေးကတော့ ပြူးထွက်နေတဲ့ အားရပါးရဆုပ်နယ်ရင်း လက်ကို ထမီကြားထဲ ထည့်ကာ အတွင်းခံပင်တီပါးပါးလေးပေါ်မှ တခါ ဂျုံနယ်သလို စိတ်တိုင်းကျ ဆုပ်နယ်နေပြန်သည်။ တခေါက်ကို(၂)နာရီဒေါ်လာ ၁၀၀) လောက်ရတယ်,ြ
ak January 3, 2013 at 5:24 AM
မစုလှိုင် ရဲ့ အကူအညီ ယူချင်တဲ့ ..မြန်မာ မိန်းမ ပြည့်တန်ဆာတွေက တော့ ပေါသလား မမေးနဲ့။ Phone 095011769
မစုလှိုင် က တယ်စွမ်းပါလား....တစ်ယောက်တည်း တဲ့နော်
သယ်ရင်းများ အတွက်..ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အရွယ်က တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေးအတွက် Nike မှထုတ်သော သားရေကွင်း (Nike+ FuelBand) လူပျိုဖော်လေးမှ ဝင်ခါစလေး၊ (အထူးဆောင်းပါး)
ak January 3, 2013 at 5:26 AM
ak January 3, 2013 at 6:54 AM
လီးတံအတု)http://www.internationalherbaliss.com/2011/07/penis-ikat-pinggang-electrik.html.ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ မင်္ဂလာဈေးသစ်ထဲမှာ စုံစမ်းပီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား..။အနိမ့်ဆုံး ကျပ် ၈၀ဝ မှစ၍ သောင်း ဂဏန်းအထိ အစားစားရှိကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်.
ak January 3, 2013 at 6:57 AM
Min Thar April 24, 2014 at 2:44 AM
มิ่งขวัญ นคร December 2, 2015 at 1:26 AM
ah April 17, 2016 at 9:25 PM
Expire date လေး နီးလာတာလဲသတိပြု…
ငါးဆယ်တန်အပြဲ နဲ့ သုံးဆယ်ကျော်အပျိုကြီးဆိုတာ
,ရွှေမတွေအမျိုးသမီးစောက်ရေပေနေသောပစ္စည်းတွေကပြဲပြဲကြီးတွေ.တွဲကျနေတာ,ရန်ကုန်မြို့မိန်းကလေးတွေအဝီစိမှာ ဂျိုးကပ်နေပြီိုး နို့သီးခေါင်းကြီးတယ်ဆိုတော့နှာစေုပ်ပျက်သွားတာပဲ အောက်ပိုင်းတော့ စုပ်ပျက်သွားတာပဲ.နို့ဖွေးဖွေးကြီး
mrs.r September 16, 2016 at 9:56 PM
စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့် ဆပ်ပြာမြှုပ်တို့တွယ်ကပ်နေသောနို့အုံကြီးနှစ်ခုကိုတချိန်တည်း တွေ့ရလေသည်။ကိုယ်လုံးကြီးအားကြည့်ရင်းမနည်းပင်စိတ်ဖြေနေခဲ့ရသော်
Øအို အားလား အင်း ဟင်း ဟင်း မောင်မျိုးရယ် မလုပ်ပါနဲ့ကွယ် မမဇွန်သင်ဇာရင်တွေတုန်နေတယ် တမျိုးကြီးဘဲဒီလိုအရသာမျိုးကိုတစ်ခါမှမခံစားရဖူးပါ။အခုတော့ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်
၏ရွှေရင်အစုံမှာအတိုင်းသားမြင်နေရလေသည်. မမဇွန်သင်ဇာ ဘယာစီယာသေးသေး
mrs.r January 7, 2017 at 10:16 PM
(စောက်ဖုတ်အတု-http://www.internationalherbaliss.com/2012/10/baby-pussy.html........ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေ လိင်အရုပ်ကို အသုံးပြုကြတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ လိင်အရုပ်အမျိုးမျိုးရှိပြီး အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီးတွေပါ အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။http://www.yezmagazine.com/2016/05/blog-post_4.html.... ရွှေလုံး (Lelo Luna Beads) - (တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၃၀၉၀ခန့် (ငွေကျပ် ၃၃ သိန်းခန့်)) ဒါကို ဘယ်မှာဘယ်လို အသုံးပြုရသလဲဆိုတာ သေချာမသိရပေမယ့် အမျိုးသမီးကိုယ်တွင်းမှာထည့်ပြီး သွားလာလှုပ်ရှားလို့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်
mrs.r January 7, 2017 at 10:21 PM
Yez Magazine 10:08 AM Knowledge
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေ လိင်အရုပ်ကို အသုံးပြုကြတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ လိင်အရုပ်အမျိုးမျိုးရှိပြီး အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီးတွေပါ အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ လိင်အရုပ်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဈေးအကြီးဆုံးလိင် အရုပ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၁။ အမျိုးသားအဂါင်္မှာ စွပ်တဲ့ လစွပ် (တန်ဖိုး - ဒေါ်လာ ၂၆၀၀ ခန့် (ကျပ် သိန်း ၃၀ ခန့်))
ငွေစစ်စစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီအစွပ်ဟာ ငွေရောင်၊ အနက်ရောင်၊ ပုလဲဖြူရောင်ဆိုပြီး ၃ မျိုးရှိပါတယ်။
ဒီအစွပ်ရဲ့ နာမည်က JCobra Silver Cock Ring ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Betony Vernon ငှက်ကုလားအုပ်မွှေး - (တန်ဖိုး - ဒေါ်လာ ၂၉၉၉ ခန့် (ကျပ် ၃၂ သိန်း ခန့်))
လိင်စိတ်ကြွလာအောင် ယားကျိကျိဖြစ်စေမယ့် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ငှက်ကုလားအုပ်မွှေးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်က ငွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမို့ ဈေးကလည်း တော်တော်ကြီးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
တုတ်ပြား (spanker) - (တန်ဖိုး - ဒေါ်လာ ၃၀၁၁ ခန့် (ကျပ် ၃၃ သိန်း ခန့်))
လက်နဲ့ ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီတုတ်ပြားဟာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အဖော်ဖြစ်သူကို ရိုက်နှက်မှ ကျေနပ်တဲ့သူတွေ အသုံးပြုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူရဲ့ အဆိုအရ ငွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်ကိုင်ဟာ ကိုင်ရတာ သက်တောင့်သက်တာရှိပြီး ရိုက်တဲ့အခါလည်း အလေးချိန်ကို မျှမျှတတဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၄။ ရွှေလုံး (Lelo Luna Beads) - (တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၃၀၉၀ခန့် (ငွေကျပ် ၃၃ သိန်းခန့်))
ဒါကို ဘယ်မှာဘယ်လို အသုံးပြုရသလဲဆိုတာ သေချာမသိရပေမယ့် အမျိုးသမီးကိုယ်တွင်းမှာထည့်ပြီး သွားလာလှုပ်ရှားလို့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်နေကုန် သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါ ဒါလေးကို ထည့်ထားရင် မိန်းမအဂါင်္ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၅။ မြင်းအမြီးနဲ့ ငွေတုတ်ချောင်း (တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၃၄၇၅ - ငွေကျပ် ၃၆ သိန်းခန့်)
ဒီလိင်အရုပ်က စအိုထဲထည့်တဲ့ ပစ္စည်းလို့ သိရပါတယ်။
၆။ ရွှေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကျားအဂါင်္တု (တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၃၄၉၀ - ငွေကျပ် ၃၇ သိန်းခန့်)
ဈေးကြီးတဲ့ လိင်အရုပ်တွေကို အဓိက ထုတ်လုပ်တဲ့ Lelo Olga ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး ရွှေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ ကျားအဂါင်္တု ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ အချစ်ထိုင်ခုံ (တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၆၉၀၀ - ငွေကျပ် သိန်း ၇၀ ခန့်)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်လက်မသန်စွမ်းတဲ့ သူတွေ ချစ်တင်းနှောလို့ရအောင် တီထွင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်လက်မသန်စွမ်းတဲ့ သူတွေအတွက် တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် သာမန်လူတွေလည်း ဒီအချစ်ထိုင်ခုံကို ကြိုက်လွန်းလို့ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ အချစ်ဟိုတယ်တွေမှာ တွေ့ရပါသတဲ့။
၈။ ရွှေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ vibrator (တန်ဖိုး - ဒေါ်လာ ၁၅ ၀၀၀ ခန့် - ငွေကျပ် သိန်း ၁၆၀ ခန့်)
မိန်းမကိုယ်တွင်းထည့်ပြီး လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရရှိစေမယ့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ သိန်း ၁၆၀ လောက်အပို ရှိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
၉။ လူနဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ လိင်အရုပ် (တန်ဖိုး - ဒေါ်လာ ၁၅၉၈၂ - ငွေကျပ် ၁၆၅ သိန်း ခန့်)
ပုံမှန်ဈေးဆိုရင် ဒီလိင်အရုပ်တွေဟာ ၂၂ သိန်းလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၁၆၅ သိန်းလောက်တော့ ကုန်မှာပါ။
အသေးစိတ်ပြင်တယ်ဆိုတာ မိတ်ကပ်လိမ်းတာ၊ မျက်လုံးအရွယ်အစား၊ ပါးစပ်အရွယ်အစားနဲ့ တခြား အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေက အရွယ်အစား၊ အရောင်တွေကို မိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။
လူနဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ ဒီလိုအရုပ်မျိုးအကြောင်း မဖတ်ရသေးဘူးဆိုရင် ဒီမှာ ဝင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
လူနဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ လိင်အရုပ်များ
၁၀။ ပလက်တီနမ် ကျားအဂါင်္တု (တန်ဖိုး - ဒေါ်လာ ၃၈၀၀၀ ခန့် - ငွေကျပ် သိန်း ၄၀၀ ခန့်)
ပိုလစ်တိုက်ထားတဲ့ ဝက်သစ်ချသားလက်ကိုင်နဲ့ ပလက်တီနမ်ကျားအဂါင်္တုဟာ စိန်တွေနဲ့လည်း စီခြယ်ထားပါသေးတယ်
mrs.r January 7, 2017 at 10:36 PM
ဗိုက်မကြီးအောင်လို့လားဗျ )ဒါက မြန်မာဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ဘဲ...စားချင်တာ မစားရ လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရ ညောင်းညှာနေလို့တ်ကြရောဂါ ဖြစ်လာတယ်
ဘဝတွေကိုလည်း သနားပါဦး မိန်းကလေးတွေမှာ